नेशनल लाईफबाट एक करोड तीन लाख १५ हजारको दावी भुक्तानी – News Dainik
News desk १ माघ २०७६, बुधबार ०७:०० बीमा प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले विर्तामोड झापा स्थित होटल ग्राण्ड प्यासिफिकमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी स्व. इन्द्र प्रसाद दंगालको मृत्यू दावी भुक्तानी गरेको छ । स्व. इन्द्र प्रसाद दंगालले २०७६ साल असार ३१ गते रु ५० लाखको दोहोरो दुर्घटना लाभ सहितको १६ वर्षे अमृत वर्षा जीवन बिमालेख खरीद गरेका थिए ।
अघिल्लॊ सनराइज बैंकले ल्यायो तीन हजार पाँच सयसम्मको क्यास ब्याक योजना
पछिल्लॊ सानिमा बैंक र पाटन अस्पतालबीचको आर्थिक सम्झौता नवीकरण